ဝိုး! အလန်းစား Discount ဈေးတွေနဲ့ Samsung Monitors တွေပါလား ~ The ICT.com.mm Blog
ဝိုး! အလန်းစား Discount ဈေးတွေနဲ့ Samsung Monitors တွေပါလား
ဟုတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Display တွေကို အမြဲတမ်းထုတ်လုပ်လေ့ရှိပြီး အရည်အသွေးပိုင်းမှာစိတ်ချရပြီးသားမို့ #Samsung ရဲ့ နာမည်ကြီး #Curved Monitor နဲ့ #Gaming Monitor တွေကို ရူးလောက်စရာ Discount ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါနော်။ Monitor ဝယ်မယ်ဆို Samsung ကိုသာ ရွေးလိုက်ပါတော့။
Samsung Curved Monitor LC34F791WQ
Samsung 32-Inch Odyssey G7 Gaming Monitor (LC32G75TQSE)
Samsung 27-Inch Odyssey G7 Gaming Monitor (LC27G75TQSE)
Samsung 27-inches CRG5 Gaming Monitor (LC27RG50FQ)
Samsung 24-Inch Gaming Monitor (LC24RG50FQ)-9
Samsung Monitor LS24R350FHE (Dark Blue Gray)-9
Samsung LED Curved Monitor LC27R500FH
Samsung Monitor LS27R350FH (Black high Glossy)-9
#ShopICT #TaZaungDaing #Promotion #TECHFEST2021 #Myanmar #OnlineTechRetailer #electronics #ITproducts #Samsung #curved #gaming #monitor
Newer လူကြိုက်များပစ္စည်းကောင်း စမတ်ဖုန်းနဲ့ အပိုပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆို အများဆုံး 25% အထိDiscount
Older အနောက်နိုင်ငံထုတ် ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျှော်စက် နှင့် မီးဖိုချောင်အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးတွေ